Ny Ubuntu Software Center, izao eo amin'ny Internet | Avy amin'ny Linux
Ny Ubuntu Software Center, izao eo amin'ny Internet
Tsikelikely dia ampitaina amin'ny Internet ireo fampiharana satria, arak'izay lazain'izy ireo dia ao ny ho avy "Cloud"; zavatra tsy ekeko, fa hey.
Miala amin'ny Ubuntu 11.10 ny zazalahin'i kanônika Nanaitra anay izy ireo tamin'ny Fitsangatsanganana an-tserasera, izay azontsika ampiasaina amin'ny ankapobeny Unity amin'ny tranonkala. Efa izao Ny Ivotoerana Rindrambaiko izay mahatratra ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny browser:
Tsy dia afaka miresaka betsaka momba ny mampiavaka azy aho satria satria tsy mampiasa Ubuntu, ary tsy afaka manana traikefa feno amin'ny fampiasana azy aho, fa amin'ny alalany dia ahitantsika ny rindranasa rehetra misy Oneiric, Natty, Maverick y nahiratra ny sainy,. Raha mpampiasa ianao Ubuntu Hanana safidy hametraka amin'ny tranokala iray ihany ianao ary raha tsy izany, toy ny lojika dia hanoro anao ny fametrahana an'io distro io.
Araka ny hitanao amin'ny sary, ireo rindranasa dia misy famaritana, fisamborana azy io, ny naoty nomen'ny mpampiasa ary, mampino, haingana kokoa noho ny kinova birao izany, mazava ho azy, ho an'ireo manana bandwidth tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny Ubuntu Software Center, izao eo amin'ny Internet
R @ iden dia hoy izy:
Toa manana zavatra tsara ny rahona fa izaho manokana dia tsy resy lahatra fotsiny, ny zava-misy fotsiny ny fanananao ny data-nao manokana eo am-pelatanan'ny hafa dia mazava be, ankehitriny raha misy rahona tsy miankina amin'ny orinasanao manana fifehezana sasany ary manome toky fa efa zavatra iray hafa, no eritreretiko, arahaba.
Mamaly an'i R @ iden
Haha inona ireo pringao, hitan'izy ireo fa maivana kokoa ireo disro hafa ary manintona ireo mpampiasa, mba hanarenana izany dia nesorin'izy ireo ny ivon-toeran'ny rindrambaiko tamin'ny fialantsiny nividy tamin'ny sinoa hahahaha.
$ huttlegates, fantatrao, GARLIC AND RANO
Saingy novakiako fa na tsy napetraka aza ny Debian na ny derivatives-ny. Afaka mametraka fonosana ho anao izy io.
arturo molina dia hoy izy:
Angamba vahaolana bebe kokoa amin'ny Lubuntu sy birao hafa tsy misy ivon-toeran'ny rindrambaiko toa an'i gnome's. Azavaiko fa misy ny kinova ho an'ny Lubuntu, saingy ratsy be izany.
Aza adino koa fa te hiditra amin'ny tsenan'ny takelaka sy finday avo lenta i Canonical ary raha ampiarahintsika miaraka amin'ny PayPal izany, heveriko fa dingana iray hafa mankany amin'ny tsenany izany: p
dingana iray hafa mankany amin'ny tsenanao
Manana fisalasalana kely momba ny fiasan-dry zareo aho: hanolo ny SC mahazatra ve sa ho safidy hafa fotsiny izy io? Hampiditra ny toerana anafenana an'ny antoko fahatelo ve ny kinova an-tranonkala an'ny SC izay manapa-kevitra ny hanampy na hifantoka amin'ny repositories ofisialy ? Hila firaketana ve izany sa hifandray mivantana amin'ny kaontin'ny mpampiasa? Ary farany, hanana ny fahafaha-miasa amin'ny maha-tantara azy izay manamora ny fametrahana ireo fonosana rehetra azonao tamin'ny fotoana iray raha sanatria mila mamerina ny rafitra ianao?
Raha misy manana hevitra na fampahalalana momba izany dia manantena aho fa afaka hizara azy.
Repoman kinova 1.3 misy
Tapitra ny torolàlana momba ny fianarana Python